Ilokishi iMpumalanga: ilanga liphuma entshonalanga – The Ulwazi Programme
Abantu base lokishini iMpumalanga emngceleni osentshonalanga yeTheku banokuningi okufanele bakujabulele. Ngempumelelo babeke emuva udlame olunzima lwezepolitiki ababhekana nalo ngonyaka wango-1980 kanye nasekuqaleni kwngo-1990 olwathatha izimpilo zabaningi ababathandayo kanye nomakhelwane. Impela, ubugebengu, ukwentuleka kwemisebenzi, izingxabano zamatekisi nobumphofu kuseyizinselelo ezinkulu. Kepha babhekana nakhoo ngomfutho ofanayo nokuzethemba babeka emuva izigigaba zakudala. Usomabhizinisi wendawo kanye nesakhamuzi uMzamo Xaba uchaza iMpumalanga njengendawo ephilayo enamandla okuba ngelinye lamalokishi ahamba phambili ezweni.
UXaba onendawo yokuwasha izimoto nendawo yokucwala izinwele (salon) eHammersdale, okuyimizuzu embalwa ukusuka elokishini, uthe enye yezinto ehlanganisa abantu wukuhlanganyela erenki yamatekisi. “Singosomabhizinisi sithola uxhaso olukhulu kubahlali. Le ndawo icishe ibe maphakathi kweTheku noMgungundlovu futhi silethe izinsiza eduze namakhaya ngakho bonga imali yamatekisi futhi, okubaluleke kakhulu, isikhathi. ” Indawo ekude ikhiqize isiko lokuzethemba komngcele phakathi kwabahlali. Isibonelo, uma abashayeli bamatekisi bendawo besesitelekeni kunzima ukuthola enye indlela yokuhamba, kanti umhlali waseLamontville esenkabeni yedolobha angamane abambe itekisi laseMlazi. Ngemuva kokwakhiwa kabusha kwenkundla yezemidlalo iMpumalanga muva nje kube sekucaca ukuthi abantu bakule ndawo kudala belambele imicimbi yezemidlalo esezingeni eliphakeme. Bathenga amathikithi futhi baphume ngobuningi babo bezobuka imidlalo yebhola, ikakhulukazi lapho bevakashelwa amaqembu amakhulu. Kepha ukuvakashelwa kwale ndawo kuveze ukuthi kusenezinselelo ezithile.
Indawo ayinalo ichibi lokubhukuda, indawo yokuphumula ephuthelwe kakhulu, ikakhulukazi uma sekusehlobo ehlobo . Oyintsha yendawo uMbali Njoko uthe engathanda ukubona iMpumalanga ijabulela izinhlobo ezifanayo zentuthuko njengezindawo eziseduze nenkaba yedolobha, njengoMlazi. “Singasithokozela isikhungo sezemidlalo ngakho-ke akudingeki ukuthi sihlale ngezimpelasonto.” Uthe ukwentuleka kwama-amenites kuholele ekutheni enye intsha ingene ebugebengwini. UNjoko uphinde wanxusa uMasipala ukuthi wakhe enye irenki yamatekisi kule ndawo. Esinye isakhamuzi esasifisa ukungadalulwa sasifisa ukuthi luphele udlame lwamatekisi, okwakungamkhumbuza into angayithandi ngempi edlule. Ezinsukwini zokubulalana ngesikhathi sobandlululo, iMpumalanga yaba sematheni emhlabeni wonke lapho izakhamizi zayo zibulalana zodwa egameni lezepolitiki.
Ngemuva kwalokho, kabonakala isimanga, kwaba yisibonelo sokuthula nokuzola. Lokhu kubongwe kakhulu ebuholini bukaSipho Mlaba ongasekho we-IFP noMeshack Hadebe we-ANC, ababeka eceleni ukungezwani kwabo ukuze bashumayele ivangeli lokuthula, ukubuyisana kanye nozinzo. Manje, eminyakeni engaphezu kweyishumi kamuva, abantu baseMpumalanga bahlangane ndawonye ukuzobahlonipha kanye nabanye abantu bendawo, okubandakanya izihlabani zezemidlalo nabaculi asebenze konke okusemandleni abo ukwenza leli lokishi neNingizimu Afrika indawo engcono. Ikhansela lendawo, uLucky Mngwengwe, lithe enye inhloso yomgubho wakamuva, osihloko sithi “Usuku lapho iMpumalanga ithi ngiyabonga,” bekuwukukhuthaza abantu abasha ukuthi balwele ukulingisa laba bantu abayizibonelo ezinhle.
“Besifuna ukuhlanganisa abantu sibakhumbuze ukuthi bavelaphi. Sihlela nokwakha ihholo lodumo lapho kuzokhonjiswa khona umlando walaba bantu. ”
Izicukuthwane okwakubalwa kuzo ukwamukela izindondo umculi owayehola ama-Soul Brothers uDavid Masondo, uMacbeth Sibaya noSibusiso Zuma nosopolitiki abaningi okubalwa uHadebe noSomlomo woMkhandlu uJames Nxumalo. UMngwengwe ubenesiqiniseko sokuthi ngosizo oluqhubekayo oluvela kuMasipala, iMpumalanga ingazibumba njengesizinda sezomnotho, sokuqashwa kanye nezokuvakasha.
“Njengoba kuzokwakhiwa inxanxathela yezitolo entsha sinethemba lokuthi amathuba omsebenzi azovulwa. Sifuna iMpumalanga ibe yindawo yezokuvakasha njengamanye amalokishi.”